အညာသားလေးက ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ...
စာရေးသူ >> အညာသား
ဖူး.. ဖူး… ဘုန်း.. ဘုန်း.. ဘုန်း…
ဘလော့ကို ဖုန်ခါလိုက်တာခင်ဗျ။ မှိုတက်နေတဲ့ ဒီဂျင်းဘောင်းဘီကို OSO နဲ့လျှော်မှ ရတော့ မယ်ထင်တယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ… ကျွန်တော်တို့ မတွေ့တာလဲကြာပြီ….။ ဟုတ်တယ်… :D
ရိုးသားကြိုးစား ကျွန်တော်အညာသား အပျင်းတအားကြီးနေတော့ ဘလော့ပေါ်မှာ ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့ပေါ့။ ကိုယ့်အိမ်ကို လာလည်တဲ့သူတိုင်း ဧည့်ဝတ်မကျေခဲ့တာလဲ ကြာပြီဗျာ..။ Intro ပြန်ဝင်တဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော်ဖတ်ဘူး၊ ကြုံဘူးတဲ့ ဟာသလေးတွေနဲ့ ဧည့်ခံပါရစေ။
ဆိုင်ရှေ့တွင် ခေါင်းကုတ်ကာ အူလည်လည်ဖြစ်နေသော ကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ ဆိုင်ရှင်က
ဆိုင်ရှင်။ ။ ဟဲ့…ကလေး
ကလေး။ ။ ခင်ဗျာ…
ဆိုင်ရှင်။ ။ ဘာဝယ်မလို့လဲ… ပြောလေ ဦးဦးကို
ကလေး။ ။ အမေက ဆေးဝယ်ခိုင်းလိုက်တာ.. အဲဒါ ဆေးနာမည်မေ့နေလို့ပါ ဦးဦး
ဆိုင်ရှင်။ ။ သေချာစဉ်းစားပါအုံး ကလေးရဲ့…
ကလေး။ ။ သြော်… မီတွန်…. မီတွန်.. ဟုတ်တယ် ဦးဦး… မီတွန် ဆိုတာတော့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမီတွန် မှန်းမသိဘူး ဦးဦးရ။
`ယခုဆိုက်ကပ်နေတဲ့ဘူတာကတော့ `မြို့လည်ရင်ပြင်´ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိ မီးရထားတံခါးများ ပိတ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ.. နောက် ဆိုက်ကပ်မဲ့ဘူတာကတော့ …´
ထိုအခိုက် ယာဉ်မောင်းခန်းအတွင်းသို့ လူမိုက်တစ်ယောက်ဝင်လာပြီး မီးရထားမောင်းသူ၏ လည်ပင်းကို ဓားဖြင့်ထောက်ကာ.. `စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ ကိုမောင်းစမ်း´ ဟု ခြိမ်းခြောက် လေသည်။
ယာဉ်မောင်း။ ။ အကို မှားနေပြီခင်ဗျ.. ကျွန်တော်တို့က မော်စကိုမြို့ပတ်ရထားပါ…
လူမိုက်။ ။ မရဘူးကွာ.. ရောက်အောင်မောင်း…
ယာဉ်မောင်း။ ။ မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်တို့က မြို့ပတ်ရထားပါ.. စိန့်ပီတာစဘတ် မြို့ကို မောင်းဘို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ..
လူမိုက်။ ။ လျှာမရှည်နဲ့… သေသွားချင်လို့လား.. ငါ `စိန့်ပီတာစဘတ်´ ကိုသွားချင်တယ်.. ရောက်အောင်မောင်းကွာ.. ဒါပဲ.. ဘာဆင်ခြေမှ ပေးဘို့မစဉ်းစားနဲ့.. စကားသံထွက်လာရင် ငါ့ဓားက မင်းလည်ပင်းကို ထုတ်ချင်းပေါက်သွားလိမ့်မယ်..
ဘယ်လိုမှ ပြောလို့မရတော့တဲ့အဆုံး… မီးရထားမောင်းသူမှ
`ယခုဆိုက်ကပ်နေတဲ့ဘူတာကတော့ `မြို့လည်ရင်ပြင်´ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိ မီးရထားတံခါး များပိတ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ… နောက်ဆိုက်ကပ်မဲ့ဘူတာကတော့ `စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့´ ဖြစ်ပါတယ်။´
နောက်ဘူတာကိုရောက်တော့ `ယခု ဆိုက်ကပ်နေတဲ့ဘူတာကတော့ `စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့´ ဖြစ်ပါတယ်´ ဟုကြေငြာပြီး.. တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့… လူမိုက်က `အေး.. အဲလိုပဲဖြစ်ရ မှာပေါ့´ ဟုဆိုကာ… ရထားပေါ်မှ ဆင်းသွားလေတော့သည်။
မင်းသား။ ။ ဖြစ်ပါ့မလားဆရာ.. ကျွန်တော်က မင်းသမီးနဲ့တွေ့ရင် ပြောရမယ့်စကားတွေ အကုန်မေ့သွားတတ်တယ်ဗျ။
ဇာတ်ဆရာ။ ။ ဖြစ်ပါတယ်ကွ.. တစ်ကယ်လို့ မင်းသမီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ မင်းပြောရမယ့်စကားတွေ မေ့သွားခဲ့ရင် ကားလိပ်နားကို ကပ်ခဲ့.. ငါ တိုးတိုးလေး လှမ်းထောက်ပေးမယ်..´
မင်းသား။ ။ ဟုတ်.. ဟုတ်ကဲ့ဆရာ…
သို့နှင့် ပြဇာတ်တစ်ဝက်လောက် မင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့ ၂ ယောက်ရင်ဆိုင်တွေ့သော အခန်းတွင်..
မင်းသား။ ။ ဟားဟားဟားဟား… ဟားဟား… ဟားဟားဟား… ဒီမှာ မိခွါညို…´ ဟု အစပျိုးပြီး.. ပြောရမယ့်စကားကို စဉ်းစားတော့ တစ်လုံးမှထွက်မလာ… ။ သို့နှင့် မင်းသမီးကို လက်ညှိုးထိုးပြီး `ဟဲဟဲဟဲဟဲ.. ဟဲဟဲ.. ဟဲဟဲ… ခွါညို… ခွါညို…´ ထင်ထားသည့်အတိုင်း မင်းသားခမျာ ဘယ်ကစလို့ ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ ရယ်သာ ရယ်နေတော့သည်။ ပရိတ်သတ်ကလည်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးဖြင့် စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြလေသည်။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေ၍မဖြစ်တော့.. ပြဇာတ်ပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်ရသည်။ ဇာတ်ဆရာမှာထားသည့်အတိုင်း… ကားလိပ်နောက်နားသို့ ဆုတ်သွားလိုက်သည်။ ကားလိပ်နောက်ထဲမှ ဇာတ်ဆရာက… `နောက်ကိုသိပ်မဆုတ်နဲ့.. ကား(ကားလိပ်) ပြဲသွားမယ်..´ ဟုပြောလိုက်ရာ.. မင်းသားက ရှေ့သို့ ၂ လှမ်း ၃ လှမ်းခန့် ပြန်တိုးလိုက်ပြီး ပြောချလိုက်ပုံက…
မင်းသား။ ။ ဟားဟားဟားဟား.. ဒီမှာ မိခွါညို… နောက်ကိုသိပ်မဆုတ်နဲ့.. ကားပြဲသွားမယ်…´
Filed under ဟိုရေးဒီရေးမျာ6းယောက်ရဲ့အမြင်
Filed under ကဗျာ 13 ယောက်ရဲ့အမြင်
`အရှိကိုအရှိတိုင်းသာ ဖွင့်ပြောမည်… မြင်မြင်ချင်း မင်းကို ချစ်သွားသည်.. ပိုင်ဆိုင်တဲ့အသည်းကို အရှုံပေးခဲ့ရာ.. ဒါ အချစ်ပဲလား စိတ်မှာ မော.. သည်..။ နားလည်မှုတံခါးတွေ ဖွင့်ထားသည်.. ကြင်နာစကားလေးတွေ မျက်ဝန်းဆီ… ပိုင်ရှင်မဲ့အချစ်ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်… ကို မညာတော့ဘူး မင်းကိုချစ်..သည်…´
အညာသား။ ။ `ဟေ့ကောင်… သီချင်းကို တိုးတိုးသက်သာ ဖွင့်စမ်းပါကွာ..။ ဒီမှာ အိပ်လို့မရတော့ဘူး။´ တကယ့်ရွာသားပီပီ သီချင်းကို အကျယ်ကြီးဖွင့်ကာ နားထောင်တတ် သော စောမဏ္ဍိုင်အား ကျွန်ုပ်မှ ထဟောက်လိုက်သည်။
မဏ္ဍိုင်။ ။ `ဟကောင်.. နာရီကိုလဲ ကြည့်အုံးကွ၊ လူအိပ်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူး´
အညာသား။ ။ `အေးကွာ… ငါလဲ ဘလော့တွေလိုက်လည်နေတာနဲ့ မိုးလင်းမှပဲ အိပ်ဖြစ်တယ်။´ နာရီကို ငုံ့ကြည့်တော့.. လက်မှာ နာရီမရှိ.. ခေါင်းအုံးအောက်တွင်လဲမရှိ၊ စားပွဲပေါ်မှာလဲမတွေ့။ `ဟေ့ကောင် ငါ့နာရီတွေ့မိသေးလား…´
မဏ္ဍိုင်။ ။ `ဟေ့ကောင် အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ လျှောက်မေးမနေနဲ့..။ မင်းကျန်စစ် ငါတို့ဆီလာ တဲ့နေ့က ချက်ကြွေးစရာမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ မင်းနာရီ သွားပေါင်ထားတယ်ဆို..´
အညာသား။ ။ `အော်.. ဟုတ်သားပဲ။ အေးကွာ.. အရင်လအကြွေးတွေလည်းမဆပ်ရသေးတော့ ဆိုင်ကလဲ ငါတို့ဝယ်ရင် အကြွေးမရတော့ဘူးကွ၊ အဲဒါနဲ့ (၁၀)တန်းအောင်တဲ့နေ့က ကောက်ရထားတဲ့ ငါ့နာရီလေး သွားပေါင်လိုက်ရတယ်´
မဏ္ဍိုင်။ ။ `မင်းကျန်စစ်ကို ထမင်း၊ ဟင်း ချက်ကြွေးတာ၊ ဘီယာတိုက်တာတွေက မင်းနာရီပေါင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့တောင် မလောက်ဘူးငါ့ကောင်´
အညာသား။ ။ `ဟေ… ဟုတ်လား´
မဏ္ဍိုင်။ ။ `ဟုတ်ပါ့ဗျာ.. ငါ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ(၁)ထည်တောင် အဆစ်ပါသွားသေးသဗျ´
အညာသား။ ။ `အေးကွာ.. ငါတို့ဆီ လာလည်သမျှဧည့်သည်တွေထဲမှာ အဲဒီ `ကျန်စစ်´ ဆိုတဲ့ကောင် အဆိုးဆုံးပဲ..။ မနက်မိုးလင်းရင် ကော်ဖီမစ်လေးနဲ့မုန့်လေးနဲ့မှ၊ ဟင်းဆိုရင်လည်း.. အရည်သောက်လေးနဲ့မှ စားတတ်တယ်ဆိုပဲ။ ပြီးတော့ ဟိုဟာမစားရတာနဲ့ ဒီဟာမကြိုက်ရတာနဲ့၊ ထမင်းစားပြီးရင်လည်း အချိုရည်လေးက သောက်လိုက်ချင်သေးသဗျာ.. တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်ကွာ.. သူ့အဖေနဲ့အမေကတောင် ငါတို့ကြွေးသလို ကြွေးမယ် မထင်ဘူး။
မဏ္ဍိုင်။ ။ `မင်းကလဲ သူ့ရှေ့မှာကျတော့ မပြောရဲပဲနဲ့´
အညာသား။ ။ `မပြောရဲလို့ မပြောတာမဟုတ်ဘူး ငါ့ကောင်ရေ…၊ လကုန်ခါနီးမှ အဲကောင်ဆီကို အလည်သွားအုံးမှာ.. ပြီးရင် အမြင်ကတ်အောင် စားပစ်၊ သောက်ပစ်လိုက်အုံးမယ်´
မဏ္ဍိုင်။ ။ `ဟကောင်.. လျှောက်ပြောမနေနဲ့၊ ငါတို့ သူ့ဆီသွားရင်လည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ချက်စားရတာပဲ´
အညာသား။ ။ `အေး .. ဟုတ်သားပဲနော်၊ ကဲ.. ထားလိုက်ပါတော့ကွာ.. အခုလောလောဆယ် ဗိုက်ဖြည့်ဘို့ ဘယ်လိုလုပ်မကြတုန်း´
မဏ္ဍိုင်။ ။ `အဲဒီမှာ ခေါက်ဆွဲခြောက်ဖျော်ထားတယ်လေကွာ..၊ ငါကတော့ စားပြီးပြီ´
အညာသား။ ။ `ဟာကွာ မင်းကလည်း ခေါက်ဆွဲခြောက်ချည်းပဲ သောက်နေရတာ (၃)ရက်တောင်ရှိပြီ.. ထမင်း၊ဟင်းလေးဘာလေး ချက်ပါအုံးကွ´
မဏ္ဍိုင်။ ။ `အောင်မလေး .. ကိုရွှေအညာသားရယ်… ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နဲ့ (၂)ယောက်တည်း စားတာတောင် အကြွေးတင်နေတာဗျာ… ဒီကြားထဲ ဟိုကောင် `ငကျန်´ က ကျုပ်တို့နာမည်ပေးပြီး အကြွေးယူသွားတာတွေကလဲ နည်းတာမဟုတ်ဘူး.. လကုန်ဘို့ (၁)ပတ်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်ကွာ… အကြွေးပေါ်အကြွေးဆင့်လို့ လူးမွေးလူရောင် မပြောင်ပဲနေပါ့မယ်ကိုယ့်လူ.. ဖြစ်သလိုပဲ စားလိုက်ရအောင်ပါ´
အညာသား။ ။ `အေးကွာ.. မင်းပြောတာမှန်တယ်… ရှိပါစေတော့လေ... ဖြစ်သလိုပဲ စားကြတာပေါ့။ မင်းဖွင့်ထားတဲ့ Nကိုင်ရာသီချင်းကို ခဏပိတ်ကွာ…၊ မင်းနဲ့ငါနဲ့ဖြစ်သလိုစားတဲ့အကြောင်း သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက် ဟစ်လိုက်ရအောင်´
မဏ္ဍိုင်။ ။ `ငါးပိရည်ကို ရဲယိုရွက်နဲ့တို့ပြီး ဆွဲဆိုဆွဲမယ်.. မင်းကိုတော့မရဲသလိုပဲ.. တော်ပြီကွာ ဆားနဲ့ပဲစားမယ်…´
အညာသား။ ။ `ဟာ… မဟုတ်ဘူးကွ ခဏရပ်အုံး။ အဲဒါမဟုတ်ဘူးမဏ္ဍိုင်ရ.. Nကိုင်ရာရဲ့ `ကိုမညာတော့ဘူး´ ကိုပြောတာလေကွာ..´
မဏ္ဍိုင်။ ။ `အော်.. အေးအေး .. သိပြီ.. စ မယ်´
အညာသား~မဏ္ဍိုင်။ ။ `လကုန်ဖို့ ၁ ပတ်သာ.. လိုတော့..သည်..။ အိမ်မှာလည်း စားစရာ တကယ်မရှိပြီ… ငါပိုင်တဲ့အကြွေးတွေ များလွန်းလှသည်… ဒါ ဘ၀ပဲလား စိတ်မှာ မော.. သည်…။ လကုန်ရက်ကျရင်… လာတောင်း..မည်… ဘယ်မှာပုန်းရမယ်.. ငါမသိပြီ… ငါပိုင်တဲ့အကြွေးတွေ.. ဆပ်ရတော့မည်.. .. ဒီနေ့လဲ.. ဖြစ်သလိုစား…….မည်..။´
ပီအက်စ်။ ။ ချင်းမလေးTAG ထားတဲ့ `ဖြစ်သလိုစားခြင်း´ ပါ။ ချင်းမလေးရေ.. ကျုပ်လဲ စာမေးပွဲရှိနေလို့ အခုမှရေးဖြစ်သဗျာ။ ရေးတာနောက်ကျသွားလို့ စိတ်ဆိုးနဲ့နော်..
Filed under ဟိုရေးဒီရေး 8 ယောက်ရဲ့အမြင်
ကျော်ကြီး။ ။`အဲဒါပဲဗျာ အဲဒါပဲ.. လေးဆူဓာတ်ပုံရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးဆိုတာ… ဖူးစမ်း အားရပါးရကြီး ၀အောင်ဖူးလိုက်စမ်းပါ သူငယ်ချင်းရာ..။ မင်းက အခုမှ ဖူးဘူးတာမဟုတ်လား ဖူးစမ်း သူငယ်ချင်း..´
သာဝ။ ။ `အာ… တီဗွီထဲမှာတော့ ခဏခဏဖူးဘူးပါတယ်ကွာ… အေး.. အပြင်မှာတော့ မင်းပြော သလို အခုမှဖူးဘူးတယ်ဆိုပါတော့´
ကျော်ကြီး။ ။ `အင်းကွာ… ငါလဲ ရွာကို ပြန်မရောက်တာကြာပြီဆိုတော့ ရွာရဲ့သတင်းလေး ဘာလေး ဘာမှမကြားရဘူးဖြစ်နေတယ်၊ တို့ရွာမှာရော ဘာတွေပြောင်းလဲကုန်ပြီတုန်းကွ´
သာဝ။ ။ `ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မပြောင်းလဲပါဘူး´
ကျော်ကြီး။ ။ `ရွာက ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့ နေပါအုံး.. ငါတို့အိမ်ရော ဘာတွေပြောင်းလဲ ကုန်ပြီတုန်းကွ´
သာဝ။ ။ `ဘာမှ မပြောင်းလဲပါဘူး၊ အဲ.. ဒါပေမယ့် မင်းမွေးထားတဲ့ကြောင်လေးတော့ သေသွားပြီကွ´
ကျော်ကြီး။ ။ `ကြောင်လေးသေသွားပြီ၊ ဟာ… အဲဒီကြောင်လေးက အရမ်းလိမ္မာတာကွာ၊ ဘာဖြစ်လို့ သေသွားရတာတုန်း´
သာဝ။ ။ `မင်းအဖေနဲ့မင်းအစ်ကို စကားများကြတယ်လေ၊ စကားများပြီး မင်းအစ်ကိုက အရက်မူးမူးနဲ့ စပါးကျည်ကိုမီးရှို့လိုက်တာ မင်းကြောင်လေးပါ ပါသွားတယ်လေကွာ´
ကျော်ကြီး။ ။ `ဟာ.. စပါးကျည်ကို မီးနဲ့ရှို့တယ်၊ နေစမ်းပါအုံး စပါးကျည်ကို မီးနဲ့ရှို့ရ လောက်အောင် အဖေနဲ့ငါ့အစ်ကိုက ဘာအတွက်နဲ့ စကားများကြတာတုန်းကွ´
သာဝ။ ။ `ဘာရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူးကွာ... မင်းညီမလေး အရက်သမားထွန်းနိုင်နဲ့ လိုက်ပြေးတဲ့ကိစ္စ´
ကျော်ကြီး။ ။ `ဘာ… ငါ့ညီမ လင်နောက်လိုက်သွားပြီ၊ နေစမ်းပါအုံး ညီမလေး လင်နောက်လိုက်သွားတဲ့ကိစ္စကို အမေက ဘာမှဝင်မပြောဘူးလားဟင်´
သာဝ။ ။ `မင်းအမေက ဘာမှ ၀င်ပြောလို့မရတော့ဘူးလေကွာ´
ကျော်ကြီး။ ။ `ပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ နေစမ်းပါအုံး သူတို့က အမေ့စကားကို နားမ ထောင်ကြတာလား.. ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း´
သာဝ။ ။ `အဲဒီလိုလဲမဟုတ်သေးဘူးကွ.. မင်းတို့ စပါးကျည်ကြီး မီးလောင်တော့ မင်းတို့အိမ်လဲ မီးထဲပါသွားတယ်လေ… မင်းအမေပါ တစ်ခါတည်းပါသွားတာ´
ကျော်ကြီး။ ။ `အောင်မလေးဗျာ.. အမေပါသွားတယ်၊ ဒါဆို ငါ့အမေသေပြီပေါ့၊ အောင်မလေး အမေရယ်… အမေရဲ့.. အမေသေတာတောင် သားမသိလိုက်ရပါလားအမေရယ်… အဟီးးးးး အဟင့် အဟင့်၊ မင်းကလဲကွာ ငါ့အမေတစ်ယောက်လုံးသေတာတောင် ထူးထူးခြားခြား ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ မင်းမို့လို့ပြောရက်တယ်.. အံ့သြပါရဲ့။ ကဲ.. ထားလိုက်ပါတော့.. ဒါဆိုရင် ငါ့အဖေနဲ့အစ်ကိုက ဘယ်မှာနေကြလဲဟင်´
သာဝ။ ။ `မင်းအစ်ကိုကတော့ မီးရှို့မှုနဲ့ထောင်ကျသွားတယ်´
ကျော်ကြီး။ ။ `ဟင်…..´
သာဝ။ ။ `မင်းအဖေကတော့ အဲဒီစိတ်နဲ့ပဲ ရူးနေတယ်…´
ကျော်ကြီး။ ။ `အောင်မလေးဗျာ… အောင်မလေး… အမေက သေတယ်၊ အဖေက ရူးနေတယ်၊ အစ်ကိုက ထောင်ကျနေတယ်၊ ညီမလေးက အရက်သမားနောက်ပါသွားတယ်… အဲဒါကိုများ ဘာမှထူးထူးခြားခြားမဖြစ်ပါဘူးလို့ မင်းမလို့ပြောရက်တယ်။ အဲဒါ ပုံမှန်အခြေအနေ ဖြစ်မလားကွ..´
သာဝ။ ။ `စိတ်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားစမ်းပါကွာ၊ ဒါဟာ လောကဓံတရားရဲ့ ပုံမှန်ပြကွက်တွေပါ´
ကျော်ကြီး။ ။ `အောင်မလေး မလေး… တည်ငြိမ်နေလိုက်တာ၊ ရင့်ကျက်နေလိုက်တာ၊ တရားတွေပေါက်နေတဲ့ တရားရှင်ကြီး အဟီးဟီး… အဟင့် အဟင့်… ရှလွတ်။ မင်း ခံနိုင်ရည်ရှိပေမယ့် ငါခံနိုင်ရည်မရှိသေးဘူး သူငယ်ချင်းရယ်... ငါ့ရင်ထဲမှာပူနေပြီ အဟင့် အဟင့်။ ကဲ.. ပြောစမ်းပါအုံး .. ဒါဆိုရင် ငါ့ညီလေးတွေ ငါ့ညီမလေးတွေရောဟင်.. ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ကြတုန်းကွာ´
သာဝ။ ။ `သူတို့ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ´
ကျော်ကြီး။ ။ `အောင်မလေး တော်ပါသေးရဲ့၊ အရီးလေးတို့က ခေါ်ပြီးမွေးစားထားလိုက် တယ်မဟုတ်လား´
သာဝ။ ။ `အဲဒီလိုလဲ မဟုတ်သေးဘူးကွ´
ကျော်ကြီး။ ။ `ဟင်.. အဲလိုမဟုတ်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်ပြန်ပြီတုန်း ပြောပါအုံးကွာ…´
သာဝ။ ။ `သူတို့အတွက်က ဘာမှပူစရာမလိုပါဘူးကွာ စိတ်အေးအေးထားစမ်းပါ´
ကျော်ကြီး။ ။ `အော်… အေး… အေးကွာ.. ငါ စိတ်အေးအေးထားလိုက်တော့မယ်နော်´
သာဝ။ ။ `ထားလိုက်စမ်းပါ သူငယ်ချင်းရာ´
ကျော်ကြီး။ ။ `တော်သေးတာပေါ့ကွာ... အခုမှပဲ ရင်ထဲမှာ အေးသွားတော့တယ်ကွာ… ပြောစမ်းပါအုံး…´
သာဝ။ ။ `သူတို့ကို တစ်ရွာလုံးက သနားနေတော့…´
ကျော်ကြီး။ ။ `အေးပေါ့…´
သာဝ။ ။ `သူတို့ကလည်း ရွာထဲမှာ လှည့်ပတ်တောင်းရမ်းစားသောက်တော့ ရွာထဲက ထမင်းကျန်၊ ဟင်းကျန်လေးတွေ ပေးလိုက်ကြတာပါပဲကွာ…´
Filed under ဟိုရေးဒီရေး4ယောက်ရဲ့အမြင်
အလွမ်းက ပင်လယ် ဆိုရင်
မှားယွင်းစွာသန္ဓေတည်ခဲ့တာ “အချစ်” ပေါ့
Filed under ကဗျာ 10 ယောက်ရဲ့အမြင်
" ဣန္ဒာဆွေ "
ပျင်းတဲ့နေရာမှာ ၀ါသနာထုံပါတယ်။ ဂစ်တာ အနည်းငယ်တီးပါတယ်။ ညီတော် မင်းကျန်စစ် ရဲ့ ဆွဲခေါ် မှုကြောင့် ဘလော့ရွာကို ရောက်လာ ရတာပါ။ အားလုံးကို ခင်မင်လျှက် ကြိုးစားနေမှာပါ။
» နိုင်ငံတကာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ
» ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ
» ဗုဓ္ဒဘာသာ ကကြီး ခခွေး
» မြန်မာ IRC နှင့်မြန်မာစကားဝိုင်း
» ပဒုမ္မာ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်
» We She Me
» ကျနော် နှင့် ကျွန်မ
» အိမ်မက် နက်
» ကိုချီရွန် (ပုလဲ)
» King Of The Life
» ကောင်မလေး ၃ ယောက်
» မြန်မာသီချင်း၊ ရုပ်ရှင်များ
» Red မြန်မာ
~ Guitar Software
~ လေ့ကျင့်ရန် Guitar TAB များ
Copyright 2008 - အညာသားလေးက ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ... - is proudly powered by Blogger